आजदेखि प्रिमियममा आइपिओ बिक्री गर्दै रुरु, कस्ताे छ कम्पनी ? कति कित्ता दिने आवेदन ? - DURBAR TIMES
HomeEconomyआजदेखि प्रिमियममा आइपिओ बिक्री गर्दै रुरु, कस्ताे छ कम्पनी ? कति कित्ता...
आजदेखि प्रिमियममा आइपिओ बिक्री गर्दै रुरु, कस्ताे छ कम्पनी ? कति कित्ता दिने आवेदन ?
रु रु जलुविद्युत परियोजनाले शुक्रबार (चैत २० गते) देखि प्रिमियम भाउमा आइपीओ बिक्री खुला गरेको छ । कम्पनीले १०० रुपैयाँ अंकित दरमा २० रुपैयाँ प्रिमियम मूल्य थप गरेर प्रतिकित्ता १२० रुपैयाँका आधारमा सर्वसाधारणलाई आइपीओ बिक्रीमा ल्याएको हो । कम्पनीले कुल ४ लाख ७ हजार ७०६ कित्ता सेयरमध्ये ८ हजार १५४ कित्ता कर्मचारी र २० हजार ३८५ कित्ता म्युचुअल फन्डहरुलाई छुट्याएको छ ।
बाँकी ३ लाख ७९ हजार १६७ कित्ताका लागि सर्वसाधारणले आवेदन दिन सक्नेछन् । यसमा चैत २४ गतेसम्म आवेदन दिन सकिनेछ । उक्त समयमा सबै आइपीओ बिक्री नभएमा वैशाख ३ गतेसम्म बिक्री खुला राख्नेछ । रु रु जलुविद्युतको आइपीओमा न्यूनतम १० कित्तादेखि अधिकतम सबै कित्ताका लागि आवेदन दिन सकिनेछ । यसमा बिक्री प्रबन्धकको काम एनएमबि क्यापिटलले गर्नेछ ।
लगानीकर्ताले सी–आस्वा प्राप्त बैंक, वित्तीय संस्था तथा मेरो सेयरमार्फत सेयर भर्न सक्नेछन् । यसअघि रु रु ले स्थानीयलाई आइपीओ बिक्री गरिसकेको छ । कम्पनीले गुल्मीको माथिल्लो हुग्दी खोलामा ५ मेगावाट क्षमताको विद्युत उत्पादन गरिरहेको छ । माथिल्लो हुग्दीले २०७१ चैतदेखि विद्युत उत्पादन गर्दै आएको छ ।
क्रेडिट रेटिङ एजेन्सी इक्रा नेपालले रु रु जलविद्युत परियोजनालाई ‘इक्रा एनपी इस्युयर रेटिङ ट्रिपल बी’ प्रदान गरेको छ । यस रेटिङले निष्काशनकर्ता कम्पनी समयमै वित्तीय दायित्व पूरा गर्न सक्षम रहेको मध्यमस्तरको सुरक्षित कम्पनी जनाउँछ । इक्राले २०७७ साउन १५ गते उक्त रेटिङ दिइको हो ।
रु रु को आइपीओमा पनि १० कित्ताका लागि मात्र आवेदन दिए पनि पुग्ने देखिन्छ । किनभने, १० कित्ताका दरले बाँडफाँट गर्ने हो भने पनि ३७ हजार ९१६ जनालाई मात्र आइपीओ बाँड्न पुग्छ ।
यसरी बाँडफाँट गरेपछि बाँकी रहेको ७ कित्ता सेयर भने १० कित्ता भन्दा बढी आवेदन दिएका मध्ये ७ जनालाई १–१ कित्ताका दरले थप हुन्छ । तथापि, यसमा कति आवेदकले कति कित्ताका लागि आवेदन दिनेछन् भनेर अहिले नै अनुमान गर्नु उचित हुँदैन ।
कस्ताे छ कम्पनीकाे वित्तीय अवस्था ?
रु रु जलविद्युत परियोजनाको अधिकृत पुँजी ५० करोड रुपैयाँ रहेको छ । यस्तै, जारी पुँजी ४० करोड ७७ लाख ५ हजार ५०० रुपैयाँ छ । यसमध्ये संस्थापक सेयरधनीबाट ३२ करोड ६१ लाख ६४ हजार ४०० रुपैयाँ र आयोजना प्रभावित स्थानीयबाट ४ करोड ७ लाख ७० हजार ५०० रुपैयाँ गरी कुल ३६ करोड ६९ लाख ३४ हजार ९०० रुपैयाँ चुक्ता भइसकेको छ । सर्वसाधारणलाई जारी हुन लागेको आइपीओ सबै बिक्री भएपछि रु रु को चुक्ता पुँजी जारी पुँजीको बराबर अर्थात ४० करोड ७७ लाख ५ हजार ५०० रुपैयाँ पुग्नेछ ।
वित्तीय प्रक्षेपण अनुसार चालु आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म रु रु को खुद नाफा ५ करोड ८५ लाख २९ हजार रुपैयाँ पुग्ने देखिन्छ ।
आर्थिक वर्ष २०७८–७९ मा ६ करोड ३४ लाख रुपैयाँ र आव २०७९–८० मा ५ करोड ७१ लाख रुपैयाँ खुद नाफा गर्ने प्रक्षेपण गरिएको छ ।यस्तै, चालु आर्थिक वर्षमा प्रतिसेयर आम्दानी १४ रुपैयाँ ३६ पैसा र प्रतिसेयर नेटवर्थ १२० रुपैयाँ ९० पैसा पुग्नेछ । आर्थिक वर्ष २०७८–७९ सम्ममा प्रतिसेयर आम्दानी १५ रुपैयाँ ५७ पैसा पुग्नेछ । प्रतिसेयर नेटवर्थ पनि १२६ रुपैयाँ ४७ पैसा हुनेछ ।
Previous articleगढीको पाँच गाउँमा पहिलोपटक बिजुली बल्यो
Next articleआजदेखि बालाजु क्षेत्रमा मेलम्चीको पानी वितरण शुरु